अमेरिकी सेनासगँ अमेरिकाले यी ७ तथ्य जहिले नी गोप्य राख्छ – Khabar Patrika Np
अमेरिकी सेनासगँ अमेरिकाले यी ७ तथ्य जहिले नी गोप्य राख्छ
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत्र ०७, २०७७ समय: ०:०१:३१
संसारभरीका सरकार र सेना केही गोप्य गतिविधी गर्छन् । तर, बाहिर भने ल्याउन चहाँदैनन् । अमेरिकी सेनालाई संसारकै सबैभन्दा शक्शिाली सेनाकारुपमा लिइन्छ । आज हामी तपाईलाई अमेरिकी सेनासँग जोडिएका केही गोप्य तथ्यका बारेमा बताउँदैछौ । जसका बारेमा अमेरिकाले संसारलाई आधिकारीक जानकारी दिन चहाँदैन ।
१. नेवाडामा छ सेक्रेट आर्मी वेश
अमेरिकाको नेवाडामा एक सेक्रेट आर्मी वेश छ । जसका बारेमा सन् २०१६ सम्म संसारलाई थाहा थिएन । अमेरिकाले यो आर्मी वेशका बारेमा जानकारी लुकाउँछ ।
रेगिस्तानमा बनाइएको सेक्रेट वेशको नजिक केही एयरक्राप्ट उडेको देखिन्छ । यसलाई एरिया ६ नाम दिइएको छ । यो खुलसा भन्दा पहिले सुरक्षा विषेशज्ञलाई समेत यस विषयमा कुनै जानकारी थिएन । समचार अनुसार अमेरिकाले यहाँ सेन्सेटिभ सेन्सर गर्ने गरेको थियो । मानव रहित विमान परिक्षण गर्ने गरेको थियो । यो एयरक्राप्ट एडभान्स स्ट्रेटजीको चलाउन मद्धत गथ्र्यो ।
२. ९ तले भवन मुनी बंकर
न्यूयोर्कमा गेन्ड सेन्ट्रल टर्मिनलको बारेमा सबै मानिसहरु जानकार छन् । यहाँ धेरै मानिसहरु आवत जावत गर्छन् । निकै कम मानिसहरुलाई थाह छ की यहाँ एक गोप्य सैन्य बंकर समेत छ । समचार अनुसार नौ तले भवन मुनी सेनाको बंकर छ । जसको नाम एम–४२ राखिएको छ । यसलाई दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा बनाइएको थियो । यसको बारेमा पनि अमेरिकाले कहीले पुष्टि गर्दैन ।
३. उत्तर कोरियाको जासुसीका लागि सबमरीन
अमेरिकाले सन् २००४ मा एक अत्याधिक प्रभावशाली सबमरीन लन्च गरेको थियो । जसको उद्धेशय गोप्य तरिकाले उत्तर कोरियाको जसुसी गर्नु हो ।अत्याधुनिक प्रविधीवाला यो सबमरीका खासकुरा यसले दुश्मनको पनडुब्बी माथि बिना हलचल आक्रमण गर्न सक्छ । यसको बारेमा धेरै जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन । यद्यपी यो सबमरीनमा केही एयरक्राप्ट र हतियार समेत राख्न सकिन्छ ।
४. अफगानी जेल
अफगानिस्तामा युद्धलाई लिएर बेला बेलामा बहस हुने गरेको छ । तर अमेरिकाले अफगानिस्तानीका लागि छुट्टै जेल बनाएको धेरैलाई थाह छैन । अहिले पनि पेन्टागनका अधिकारीहरु अफगानीलाई दुर्व्यवहार गर्ने गर्छन् ।
५. प्रोजेक्ट MK-ULTRA
शीत युद्धको समयमा अमेरिकी संस्था सीआईएले माइन्ड कन्ट्रोलसँग एक प्रयोग गर्यो । मानिसहरुलाई केही लागु औषधको प्रयोग समेत गर्यो । सन् १९७३ मा सीआईएका डायरेक्टर रिचर्ड हेल्म्सले यो प्रयोगमा जोडिएका सबै कागजात नष्ट गर्न आदेश दिए । यो प्रोजेक्टमा २०० लाख डलर खर्च भएको बताइएको छ ।
६. ऊटाहको गोप्य सैनिक अखडा
ऊटाहको टुलेमा पनि अमेरिकाको एक गोप्य सैनिक अखडा छ । यसका बारेमा अलग–अलग हल्ला फैलाईदै आएको छ । केही रिपोर्टका अनुसार यहाँ नयाँ हतियार परिक्षण गर्ने गरिन्छ । अन्य केही रिपोर्टका अनुसार यहाँ बायोलोजिकल र केमिकल युद्ध रणनीतिको अभ्यास गरिन्छ ।
लास वेगास नजिकै अमेरिकाको एक गोप्य एरिया–५१ छ । यहाँ अमेरिकाको सीआईए एजेन्ट्स दिन रात काम गर्छन् । सीआईए एजेन्ट्सलाई यस्तो सपथ दिइन्छ की यहाँ के चलिरहेको छ कसैलाई केही बताउँदीन । सन् १९६० को दशकमा एरिया–५१ लाई सेक्रेट फ्लाइङ जोनकारुपमा एयरक्राफ्टको टेस्टिङ हुने गरेको थियो ।
गर्छन् । तर, बाहिर भने ल्याउन चहाँदैनन् । अमेरिकी सेनालाई संसारकै सबैभन्दा शक्शिाली सेनाकारुपमा लिइन्छ । आज हामी तपाईलाई अमेरिकी सेनासँग जोडिएका केही गोप्य तथ्यका बारेमा बताउँदैछौ । जसका बारेमा अमेरिकाले संसारलाई आधिकारीक जानकारी दिन चहाँदैन ।